Ampidino ny TV VIP tsy ara-dalàna ho an'ny Android [2022 Update]
Febroary 21, 2022 Janoary 12, 2022 by Reyan Ahmad
Fotoana sarotra ny mandany am-bolana ao an-trano noho io toe-javatra ankehitriny io. Noho izany, eto izahay miaraka amina fampiharana mahatalanjona, izay mety hanalavitra fotoana. Illegal TV VIP dia fampiharana Android fialamboly, izay manolotra taonina amin'ny fantsom-pahitalavitra, Sarimihetsika, Serivisy TV, ary serivisy streaming hafa.
Araka ny fantatrao noho ny zava-misy ankehitriny, olona an-tapitrisany no mihidy ao an-tranony. Ny tsy fanaovana na inona na inona dia mahasosotra azy ireo. Noho izany, ho an'ireo olona rehetra ireo ary indrindra ho an'ireo mpitia fialamboly no nitondranay ity fampiharana ity.
Manolotra serivisy marobe izy io, izay hozarainay aminao. Azonao atao koa ny mijery ny fialamboly tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fikarohana ity app ity. Mila misintona azy fotsiny ianao ary mampiasa azy. Saingy alohan'ny hampiasana an'ity rindranasa ity dia tokony ho fantatrao kely momba ity app ity. Noho izany, mijanona kely fotsiny aminay.
Topimaso momba ny VIP tsy ara-dalàna TV
Izy io dia fampiharana Android, izay manolotra fialamboly tsara indrindra. Afaka mahita ny fomba rehetra mety hampiala voly ny tenanao sy ny fianakavianao ianao. Araka ny nanambaran'ny anarany fa fampiharana amin'ny fahitalavitra izy io, midika izany fa hahita fantsona fahita amina taonina manerana ny tany ianao.
The IPTV App manolotra ny sasany amin'ireo IPTV tsara indrindra, izay ahafahanao mijery fantsona samihafa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Misy fizarana miparitaka ho an'ny IPTV, izay ahitanao fantsona fahitalavitra. Manolotra anaran'ny firenena samihafa izy io, izay ahafahanao miditra amin'ny firenena iray.
Raha tia fanatanjahan-tena ianao dia manolotra lalao mivantana amin'ny lalao samihafa. Mila mahita fotsiny izay tianao hojerena ianao ary manomboka mijery. Manolotra fantsona ara-panatanjahantena mivantana sy tranokala amin'ny alalàn'izy ireo ianao, afaka mijery lalao spaoro mivantana sy maro hafa aza.
Manolotra fizarana ho an'ny Sarimihetsika sy sarimihetsika koa izy io, izay misy sarimihetsika an-taonina azo alefa. Misy mpizara isan-karazany amin'ny alàlan'izy ireo ahafahanao mizotra tsara tsy misy tara. Manolotra fampisehoana avo lenta ihany koa izy io, izay hanitsy arakaraka ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana Internet.
Misy ihany koa ny andian-tsarimihetsika, izay ahitanao maimaim-poana Netflix, Blu, ary andian-tantara hafa. Afaka mahita fizarana samihafa ianao ary koa fonosana feno amin'ny fizarana rehetra. Raha vantany vao manomboka mijery ianao dia milalao ho azy ny ampahany manaraka ary sns.
Ny olana tokana amin'ity rindranasa ity dia ny amin'ny teny tiorka ihany no misy ilay kinova ankehitriny. Noho izany, sarotra be ho an'ny sasany izany, saingy mitovy amin'ny teny anglisy izy io ary noho ny interface tsara. Tena mora azo izany.
Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao na amin'ny fisintomana dia azonao atao ny mifandray aminay amin'ny fizarana hevitra. Mila miditra ny mailaka anao fotsiny ianao ary manoratra ny olanao. Hiezaka hanampy anao amin'ny fomba rehetra izahay.
anarana VIP TV tsy ara-dalàna
Version v9.2 (6)
Anaran'ny fonosana tsy ara-dalàna.tvvip
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.4 sy ambony
Endri-javatra manan-danja amin'ny VIP TV tsy ara-dalàna
Rehefa nizara fampahalalana vitsivitsy momba an'ity fampiharana ity izahay ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy zavatra hafa azo hazavaina. Noho izany, hizara lisitra tsotra iray amin'ireo fiasa fototra izahay. Afaka mahita fiasa misimisy kokoa ianao rehefa mizaha ity app ity.
Lisitry ny endri-javatra
Fantsona fahitalavitra maro taonina
Sarimihetsika maro be
Serivisy fahitalavitra Premium maimaim-poana
Fanasokajiana tsara indrindra
Izahay koa manana fampiharana mitovy aminao, manantena fa tianao izany.
Ahoana ny fampidinana ny tsy ara-dalàna TV VIP Apk?
Araka ny voalaza, fampiharana tsy ara-dalàna izany. Ka tsy misy izany ao amin'ny Google Play Store na tranokala hafa. Aza matahotra anefa, hizara rohy miasa azo antoka sy miasa ho an'ity fampiharana ity izahay. Tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana eto amin'ity pejy ity, izay ho eo an-tampon'ny sy ambany.
Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy. Hanomboka ho azy ny fampidinana.
Ny VIP TV tsy ara-dalàna no fampiharana tsara indrindra, ahafahanao mahita fialamboly betsaka. Afaka mandany ora maro amin'ny fankafizana an'ity fampiharana ity ianao ary aza adino ny mizara izany amin'ny namanao sy ny fianakavianao.
Sokajy Apps, Entertainment Tags VIP TV tsy ara-dalàna, TV VIP tsy ara-dalàna Apk, App VIP TV tsy ara-dalàna, IPTV App Post Fikarohana
Adobe Premiere Pro APK Download ho an'ny Android [2022 Edition]
Doraemon Virtual Apk Download ho an'ny Android [Vaovao 2022]